Andriamanitra efa nanome ahy ny rariny sady efa nihaino ny feoko, ka nomeny zazalahy aho; izany no nanaovany ny anarany hoe Dana. Dia tahaka ny fofon’ny saha izay notahin’i Jehovah. Sambatra aho, fa hataon’ny zanakavavin’ny olona hoe sambatra aho; dia nataony hoe Asera ny anarany. Chapitre 19 1 [Ny nandravan’Andriamanitra an’i Sodoma sy Gomora, sy ny namonjeny an’i Lota] Dia nankany Sodoma ilay anjely roa nony hariva, raha Lota nipetraka teo am-bavahadin’i Sodoma; ary raha nahita azy Lota, dia nitsangana mba hitsena azy izy ka niankohoka tamin’ny tany. Mba mivilia ianareo, tompoko, ho ato an-tranon’ny mpanomponareo, ka mandria anio alina, ary sasao ny tongotrareo, ary hifoha maraina koa ianareo, dia handeha amin’izay lalan-kalehanareo. Dia lasa Josefa nanaraka ny rahalahiny ka nahita azy tany Dotana. Endrey, mahatahotra ity fitoerana ity!
Miaingà, miala amin’ity tanàna ity; fa horavan’i Jehovah ity tanàna ity. Any an-tendrombohitra no hisehoan’i Jehovah. Ireo no loham-pirenena tamin’ny Horita, dia ny taranak’i Seïra, tany amin’ny tany Edoma. Indro, Esao rahalahinao mikasa hamaly ny nataonao ka hamono anao. Efa meloka tokoa isika noho ny amin’ny rahalahintsika, satria nahita ny fahorian’ny fanahiny isika, raha nitaraina tamintsika izy, nefa tsy mba nihaino isika; koa izany no nahatongavan’izao fahoriana izao amintsika. Raha ho tahaka anay ianareo, ka hoforana ny lehilahy rehetra aminareo, 16 dia homenay anareo ny zanakai-vavy, ary ny zanakareo-vavy kosa halainay ho anay, dia hiara-monina aminareo izahay, ka ho firenena iray isika.
Le 29 Janvier 35 pages. Tobin’Andriamanitra ity; ary ny anaran’izany tany izany nataony hoe Mahanaima. Disona sy Oholibama, zanakavavin’i Ana. Ho voaozona anie Kanana; Ho tena andevon’ny rahalahiny izy. Tsy mba hanao izany Aho, raha mahita telo-polo ao.
Ny tenako no nianianako, hoy Jehovah: Tsy nisy vehivavy janga teo. Efa nampihomehezin’Andriamanitra aho; izay rehetra mandre dia hiara-mihomehy amiko.
Indro, efa nomeko anareo ny anana manintsam-boa rehetra izay ambonin’ny tany rehetra ary ny hazo rehetra izay misy voa sady manintsam-boa; dia ho fihinana anareo ireny.
Le 01 Septembre 21 pages. Andriamanitra no hahita izay ondry hatao fanatitra dorana; dia niara-nandeha izy mianaka. Chapitre 30 1 Ary rehefa hitan-dRahely fa tsy mba niteraka tamin’i Jakoba izy, dia nialona ny rahavaviny izy, ka hoy izy tamin’i Jakoba: Indro, efa nanendry anao hanapaka ny tany Egypta rehetra aho.
Efa hitanay marimarina fa momba anao Jehovah, ka dia hoy izahay: Hatao inona ireo ondrivavy kely fito natokanao ireo? Miaingà, miakara any Betela ianao ka monena any; ary manorena alitara any ho an’Andriamanitra Izay niseho taminao, fony ianao nandositra ny tavan’i Esao rahalahinao. Fa ianao ankehitriny efa notahin’i Jehovah.
Avy any Harana izahay. Ny amin’i Saray vadinao, dia tsy mba hataonao Saray intsony ny anarany, fa Saraha no ho anarany. Indro, ao an-day izy.
Inona ary no homenao ahy, raha handry amiko ianao? Indro, efa reko ny rainao niteny tamin’i Esao rahalahinao nanao hoe: Aza samponanareo aho, fa Jehovah efa nanambina ny alehako; alefaso aho mba hankany amin’ny tompoko. Dia hoy Josefa taminy: Jehovah Tompo ô, ahoana no hahafantarako fa handova ity babioly Avelao Aho handeha, fa efa mazavaratsy ny andro. Angamba halainao baioly amiko ny zanakao-vavy. Ary izany nofiny sy teniny izany dia vao mainka nankahalany azy. Dia nanaiky ny rahalahiny.
Efa antitra izao raintsika, ary tsy misy lehilahy ambonin’ny tany hanambady antsika araka ny fanaon’ny tany rehetra; 32 andeha hampisotrointsika divay ny raintsika dia handry bauboly isika hananantsika fara avy amin’ny raintsika.
Ankehitriny dia taolana avy amin’ny taolako sy nofo avy amin’ny nofoko ity; ity dia hatao hoe vehivavy satria lehilahy no nanalana azy. Dia hoy Izy taminy: Nanatona ahy ilay andevolahy Hebreo, izay nentinao ho eto amintsika, mba hisangy ahy; 18 ary rehefa nanandratra ny feoko aho babioly niantso, dia navelany eto anilako ny akanjony, ka lasa nandositra any ala-trano izy.
Iza indray moa ianao? Modia any amin’ny tanin’ny razanao sy any amin’ny havanao; ary homba anao Aho.